Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण खाताबाटै हरायो साढे १६ करोड
५ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:५२
काठमाडौँ, ५ साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको बैंक खाताबाटै झन्डै साढे १६ करोड रुपैयाँ हराएको छ । अस्पतालको बैंक नगदी किताबले २०७६ असार मसान्तसम्ममा (मार्गस्थ र नगद ३ लाख रुपैयाँबाहेक) ९८ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दात देखाएको थियो । सो मितिको बैंक स्टेटमेन्टअनुसार भने ८१ करोड ८३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । बैंकमा १६ करोड ४४ लाख ८ हजार रुपैयाँ घटी देखिएको छ । घटी देखिएको रकमका सम्बन्धमा छानबिन गरी बैंकमा जम्मा हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन ग्लोबल बैंकमा २ करोड ६४ लाख ३८ हजार ऋणात्मक मौज्दात देखाएकोमा बैंक विवरण प्राप्त नभएकाले स्थिति जानकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अस्पतालका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले ग्लोबलमा बैंकिङ कारोबार नगरिएको बताए । ‘खाता नभएको बैंकमा कसरी कारोबार हुन्छ र ? ’, डा. खड्गाले भने ।
यसैगरी नेपाल बैंकमा पाँच खाता, नबिल बैंकमा एक खाता र हिमालयन बैंकको एक खाता (राहत खाता)मा अस्पतालको स्रेस्ताअनुसार १ करोड ६२ लाख २० हजार मौज्दात थियो । तर, बैंकमा ११ लाख ७० हजार मात्र मौज्दात देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, १३ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वमा महामारिको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण विश्वभर नै अर्थतन्त्र
अब नेकपामा पुस्तान्तरण अपरिहार्य भयोः मन्त्री भुसाल
चितवन, १३ मंसिर । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले सत्तारुरुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी दिनमा पुस्तान्तरणको
काठमाडौँ, १३ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्